नोकझोंकमै आस्थालाई वारेन्ट काट्ने प्रहरी :: Setopati
शोभा शर्मा काठमाडौं, माघ ६
प्रहरीले गायिका आस्था राउतविरूद्ध अभद्र व्यवहारको उजुरी दिएर सिडिओबाट 'वारेन्ट' (पक्राउ पुर्जी) लिएको घटना अहिले विवादित छ।
हातमा कफी बोकेर सुरक्षा जाँच गर्ने ठाउँमा पुगेकी आस्था महिला प्रहरीले ज्याकेट खोल्न लगाउँदा बाहिरैबाट चेक गर्न भन्छिन्। प्रहरीले उनको कफी समातेर छेउमा राखिदिन्छिन्। उनी फन्किँदै ज्याकेट खोलेर एक्सरे मेसिनमा हाल्छिन्। अनि उस्तै 'तेवर'मा ज्याकेट मेसिनबाट झिक्छिन्।
त्यही बेला महिला प्रहरीले उनको पाखुरा समात्छिन्। 'कफी लिएर जानू' भन्छिन्। आस्था कफी लिन मान्दिनन्। नोकझोंकमा टेबुलमा थोरै कफी पोखिन्छ। उनीहरू कफीको कप एकअर्कालाई सारिदिन्छन्।
भिडिओ सार्वजनिक भएपछि गायिका राउतले त्यहाँ के भएको हो भनेर आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेकी छन्। प्रहरीले आफूलाई तँ भनेर सम्बोधन गरेको र 'ज्याकेट खोलेर आइज' भनेको उनको दाबी छ।
‘तेरो कफी लैजान्छस् कि ब्यागमा खन्याइदिउँ' भनेर प्रहरीले भनेको आस्थाले दाबी गरेकी छन्। भिडिओमा पनि प्रहरी जवानले ब्यागमा कफी खन्याउन खोजेको प्रस्टै देखिन्छ।
उक्त घटनालगत्तै भद्रपुर एयरपोर्टमा ओर्लिएपछि गाडीमा बसेर आस्थाले एउटा भिडिओ बनाएकी छन्। त्यहाँ उनी प्रहरीलाई 'डन्ठे' भनेर गाली गर्छिन्। आफूलाई 'तँ' भनेकोमा आपत्ति जनाउँछिन्। तल्लो तहका प्रहरी 'असभ्य' भएको कुरा आफू पनि असभ्य भाषामै बताउँछिन्।
सबै मानिस एउटै स्वभावका हुन्नन्। कोही शान्त हुन्छन्, कोहीले रवाफ देखाउँछन्। कोही छिटो झोंक्किन्छन्, कोही मुसुक्क हाँस्दै 'अति' पनि सहन्छन्।
यहाँनिरबाट प्रहरीको 'अति' सुरू हुन्छ।
सुरक्षा जाँच गर्दा आस्था संयमित हुनुपर्थ्यो। त्यसमाथि विमानस्थलको जाँच अझै संवेदनशील हुन्छ। तर, आस्थाले भनेजस्तै ज्याकेट खोल्ने नियम त्रिभुवन विमानस्थलमा छ? उनले 'मलाई हतार छ, यत्तिकै जाँच गरिदिनुस् न' भनेपछि प्रहरीको दायित्व उनलाई ज्याकेट खोल्नैपर्छ भनेर राम्ररी सम्झाउने हो वा ज्याकेट खोलेर आइज भन्दै ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गर्ने हो?
जंगिदै आस्थालाई ‘तँ’ भन्नु प्रहरीले बाचा गरेको 'मुस्कानसहितको सेवा’ को नमूना हो?